Yuusuf Garaad “Maan la heshiinno Shabaab” – Bandhiga
Ciidanka Shabaabbadankiis waa dhallinyaro Soomaaliyeed. Waa dhallinyaro uu gabay Qarankoodu.Waa dhallinyaro ku dhashay ama ku barbaaray iyada oo uu maqan yahay Qaran sugaamnigooda. Waayay Dowlad siisa adeeg waxbarasho iyo mid caafimaad. Aan helinHey’ado u abuura fursado shaqo. Aan arag adeeg garsoor oo cidda ku xad gudubtauu isaga qaban karo.